Qofkii ugu horeeyey oo muqdisha ugu dhintey coronavuris – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qofkii ugu horeeyey oo muqdisha ugu dhintey coronavuris
Qofkii ugu horeeyey oo muqdisha ugu dhintey coronavuris
Shariif Maxamed oo da’diisu ahayd 58 jir ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee cudurka Coronavirus ugu geeriyooda gudaha dalka Soomaaliya. Shariif muddo 10 beri ah ayuu ku jiray Isbitaal sida eheladiisu ii sheegeen, shalay ayaana la ogaaday in uu qabo cudurkaan. Shariif ayaa la sheegay in uu cudurka ku qaaday gudaha dalka Soomaaliya, isaga oo aan dibedda u safrin❗️
Bal adigu qiyaas inta qofood ee cudurkaan si sahlan ugu sii gudbi karo. dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ee dabiibayay marxuumka, dadkii la joogay marxuumka iyo kuwii ay la sii macaamileen intaba halis ayay ugu jiraan cudurkaan❗️
Waxaan u tacsiyeynayaa Fartuun Shariif iyo saygeeda Cabdiraxman Alcadaala iyo dhamaan qaraabada in samir iyo iimaan Allaha ka siiyo marxuumka. Isagana qabriga Allaha u waasiciyo, marti la jecel yahayna Allaha ka dhigo. Aamiin.
Previous articleBoortooyada ingiriiska oo Maanta gaadhey dhimashadii ugu badneyn maalin kaliya Corona Virus.
Next articleWasaarada caafimadka soomaliya ayaa shaacisey 4 kiis oo cusub iyo qofkii ugu horeeyey ee u dhinta CoVID19
Soomaaliya iyo Kenya oo heshiis gaaray + Sawirro